Wararka - Dhammaan Cimilada Xamuulka qaada ee loo yaqaan 'Tesla Model Y Custom Fit Rear Trunk Mat'
Dhamaan Xamuulka Xamuulka Hawada ee Tesla Model Y Custom Fit Rear Trunk Mat
Qalabka Xamuulka-Hawada-Dhammaan waxaa loogu talagalay inay ka ilaaliyaan aagga xamuulkaaga daadinta, wasakhda, dhoobada iyo wasakhda.
Meelaha dhaadheer ee qotada dheer waxay u dhaqaaqaan oo biyaha u qabtaan si wax ku ool ah, halka derbiyada dhinac ee korayna ay bixiyaan difaac gees ilaa gees ah oo ka hortagaya
dareere ka daadanaya rooga.
Maqaarka u adkaysta barafku wuxuu ka caawiyaa inuu ilaaliyo raashinka iyo agabka alaabta lagu keydiyo jirridda kaydinta iyadoon lagu wareejin.
Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda iskaanka leysarka ee saxda ah, dhammaan 3D Cargo Liners ayaa loo qaabeeyey si ay ugu habboonaadaan sagxadaha jirkooda saxda ah ee leh saxsanaanta ugu badan iyo sagxadda dhulka. uma baahnid inaad la kulanto urta caagga ah ee aan fiicnayn.Ma sahlanaanin in la nadiifiyo dermooyinkan. Si fudud ku tirtir maro qoyan, ama ka qaad gaarigaaga, tuubbada ka dhig oo mar labaad alaabadaada rarka cusub ka dhig.
The xamuulka qaada xamuul-ku-habboon ayaa ah ilaalinta gudaha ee kacaanka gawaaridaada oo leh qaab-dhismeed cusub oo saddex-lakab oo gaar ah leh. Naqshadeynta saddexda cabbir ee digitized-ka ah oo lagu cabiray saxmooyinka gudaha ee gaarigaaga si loogu xado qaska iyo daadashada. Lakabka hoose ee kahortaga taraafikada (patid anti-skid) ayaa sagxadaha ku haysa meel aan waxyeelo u geysan rooga hore. Lakabka dusha sare ee xarrago leh wuxuu bixiyaa muuqaal, biyo-gelin, difaac si loo difaaco gudahaaga.
Moodhalka Y TPR gogosha baabuurta Custom Fit All-Weather Cargo Liners waa kacaanka ilaalinta gudaha iyo mid ka mid ah qalabka ugu habboon ee gawaaridaada. Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda iskaanka leysarka ee horumarsan, xamuul kasta oo xamuul ah waxaa lagu cabiraa inuu ku xirnaado gaarigaaga jirkiisa si sax ah ugu saxsanaanta ugu badan iyo dabaqa dhulka. Dhismaha isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa loogu talagalay in lagu bixiyo ka-hortagga gudaha ee baabuurta oo dhammaystiran, nuugo gariirka, yareeyo buuqa waddada, iyo in raashinka lagu ilaaliyo jirridda iyada oo aan lagu wareegin.
Waqtiga boostada: Oct-08-2020
Maxay ku kala duwan yihiin adiga ...
PVC iyo derin cagaha TPE